Kufunga nezvekufamba pabhiriji rinotevera? | Absolut Kufamba
Kufunga nezvekufamba pabhiriji rinotevera?
Absolut Kufamba | | Prague, Roma
Kana iwe uri inveterate mufambi, iwe ungangove watova neziso pane november zambuko. Kudzoka kumuitiro uye zuva nezuva zvinoita kunge zvisina kuomarara kana iwe uchiziva kuti munguva pfupi iwe unenge uchinakidzwa nekutiza zvakare iyo inokutendera iwe kuti uwanezve manzwiro anofamba anogadzira.
Dzimwe nguva hazvisi nyore, muzhizha tinopambadza chitsama chemari pazvinhu zvekuwedzera zvatinogona kudzivirira zvachose. Asi muyedzo uripo, uye materu ane tapas uye doro mazuva mazhinji anotora mutero. Saka nguva dzose isu tinotsvaga zvinopihwa, zvikwereti tinotodzidza isu nzira yekuwana chikwereti kuramba uchifamba.
1 Matipi ekudzora mutengo pane yako inotevera kutiza
2 Tsvaga Europe pabhiriji raNovember
Matipi ekudzora mutengo pane yako inotevera kutiza
Con viaconto, chokwadi ndechekuti zvese zviri nyore, kunyangwe tikakupa zvimwe zvinoratidza kuti ndeapi injini dzekutsvaga dzaungashandisa, kunyorera, makadhi echikwereti, manomano ekuwana pekugara nebhajeti shoma, nezvimwe.
Yedu yekutanga tip ndeimwe yeakanyanya kukosha. Ichakubatsira iwe kuchengetedza uye kugona kurarama kazhinji kazhinji nzendo uye getaways kupfuura iwe zvawaimbofungidzira ... Zano nderekuti iva akaoma, ichi ndicho chakavanzika chakachengetedzwa chevose vafambi vepakati. Isu tinorarama munharaunda izere nezvido uye nemiedzo inotora pamusoro pedu pfungwa uye tinopedzisira tatenga zvinhu zvisina basa zvachose. Kana iwe ukafunga kusarudza kucheka kurasikirwa kwako pane zvimwe whims, hazvizove nyore, asi iwe uchaona marongero aunoita nekukurumidza uye unakirwe nekumwe kupora
Zvikumbiro zvaunoda hongu kana hongu pane yako smartphone. Skyscanner ndiyo yakachipa ndege yekutsvaga injini par kugona. Inopa zvakawanda zvakasiyana uye chakanakisa pane zvese ndechekuti iwe unogona kutsvaga mwedzi waunoda kufamba uye uone kuti izuva ripi rakachipa. Izvo zvakakosha kuti utore nguva uchitsvaga yakachipa nendege, sezvo ivo vachiwanzove chimwe chezvinhu zvinodhura pane chako rwendo.
Chimwe chinhu chinoshanda kwazvo chisingamboshayike kubva pafoni yangu Mepu. Icho chingori chikumbiro senge google mepu asi zvakanyanya kukwana. Tea dhawunirodha mepu yaunoda uye kana uchinge watora pasi unogona kuishandisa isingaiti uye inoshanda chaizvo. Ichi chishandiso chinopa dzakasiyana mhando dzekutsvaga senge mahotera, maresitorendi, poindi dzekufarira munzvimbo, nezvimwe Izvo zvinongondibhowa.
Uye pakupedzisira mukati meangu akakosha, Kubhuka uye Airbnb. Aya ndiwo mafomu ekutsvaga pekugara uye vanoshanda zvinoshamisa. Iwe unogona kuronga yako yekutsvaga zvinoenderana nezvaunoda uye uchaona kuti mhedzisiro haizokuodza moyo. Imwe yemazano angu ndeyekupedza nguva uchitsvaga pekugara, senge zviri munyaya dzendege, kutsvaga chaiko zvibvumirano inyaya yenguva uye zvishoma rombo rakanaka. Zvakanaka, sezvandaitaura, sarudza zuva uye tanga kutsvaga kwako kwekugara. Kuchenjera! Usambofa wakagara chete neyekutanga mhedzisiro, scroll uye iwe uchaona kuti zvirinani zvipo zvinowoneka mukati mechishandiso mushure. Rangarira kuti sarudzo dzinoonekwa munzvimbo yekutanga dzakasimudzirwa kuti dzive munzvimbo dzekutanga uye hadzisi dzakachipa nguva dzose. Dzimwe nguva zvinonakidzawo kusiyanisa mitengo yakanangana nehotera, ziva kuti idzi mhando dzekushandisa dzinobhadharisa muzana kune manejimendi, ayo dzimwe nguva hotera yacho inopa mimwe mitengo kana kunyange kukwidziridzwa kwakakosha.
Ndakatombokanganwa! Zvinoenderana nenyika yauri kuenda, iwe unofanirwa kuve uine zvipo zvekutsinhana kwemari. Mari iyi yakaenzaniswa sei neeuro, mutengo wekugara muguta iro raunofunga kuti uwane ... Zvakakosha kuti udzidze nzvimbo iyi zvishoma kuti pasava nechinhu chingakutorera kushamisika. Panyaya yekutsinhana kwemari, tinokurudzira kushandisa kadhi rakanakira zviitiko izvi, kune akati wandei, asi chakanakisa par kugona ndeye Bnext. Kutenda kwazviri unogona kuendesa kubva kukadhi rako pachako, kuenda kuBnext kadhi uye kubvisa mari nekomisheni shoma munyika dzese, zvakare nguva dzose pamutengo wakanakisa wekutsinhana Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti iwe unogona kuvharira uye kumutsiridza kadhi racho pachako kubva kune yako nhare kana iwe ukapfuura nemunzvimbo dzinogadzira kusavimbika kana iwe unongoda kuivharira kana iwe usingafanire kuishandisa.
Zano rakanaka, huh? Kune vane ruzivo rwakanyanya mukufamba, aya matipi haana chinhu chitsva, kana pamwe ndeechokwadi, asi ndichiri kutarisira kuti iwe unogona kuisa mamwe mazano mukuita.
Tsvaga Europe pabhiriji raNovember
Roma inzvimbo isingazomboodza moyo
Ini pachangu, kwevhiki yaNovember, ndinosarudza nyika nemaguta ane runako asi izvo panguva imwechete hazvisi kure zvakanyanya. Mune mamwe mazwi, kana iwe uine mazuva mashoma, haisi iyo nguva yekuenda parwendo rurefu kunze kwekunge watanga chiitiko chakakura pasina tikiti rekudzoka. Zvakanaka, munaNovember, tinokurudzira kufamba muEurope pasina kupokana, heano mamwe mazano:
Tizira kuBelgium uye unakirwe neBrussels, Ghent uye Bruges parwendo rumwe chete.
Budapest, chiratidzo chiratidzo uye kunyanya. Dhakwa nerunako rwayo.
Shanyira mashiripiti akajeka, famba nengano muhupenyu chaihwo.
La yekare yeRoma iyo isingambove yakaipa pfungwa, izere neyegastronomic tsika uye yakanaka mapurani
Parizvino mazano edu ebridge rinotevera munaNovember.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kufunga nezvekufamba pabhiriji rinotevera?